Awiei no adu (1-27)
Mmusu soronko (5)
Wɔbɛtow sika agu mmɔnten so (19)
Wobegu asɔrefi no ho fĩ (22)
7 Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ: 2 “Wo, onipa ba, nea Awurade Tumfo Yehowa aka akyerɛ Israel asaase ni: ‘Awiei! Awiei no adu ama asaase no afanan nyinaa. 3 Afei w’awiei adu, na mehwie m’abufuw agu wo so; mebu wo atɛn sɛnea w’akwan te na mama woabu w’akyiwade nyinaa ho akontaa. 4 Merenhu wo mmɔbɔ na me yam renhyehye me mma wo;+ mɛma w’akwan adan aba wo so, na mɛma woatwa w’ankasa akyiwade so aba,+ na mubehu sɛ mene Yehowa.’+ 5 “Nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni, ‘Hwɛ, mmusu reba! Mmusu soronko bi reba.+ 6 Awiei bi nam kwan so; awiei no bɛba; ɛbɛsɔre* aba wo so. Hwɛ, ɛreba. 7 Wo a wote asaase no so, adu wo so.* Bere no reba, na da no abɛn.+ Ɛbɛyɛ gyegyeegye, na ɛrenyɛ mmepɔw so osebɔ. 8 “‘Ɛrenkyɛ koraa mɛma m’ani abere wo so,+ na mahwie m’abufuw nyinaa agu wo so;+ mebu wo atɛn sɛnea w’akwan te, na mama woabu w’akyiwade nyinaa ho akontaa. 9 Merenhu wo mmɔbɔ, na me yam renhyehye me mma wo;+ mɛma w’akwan adan aba wo so na woatwa w’ankasa akyiwade so aba, na mubehu sɛ me Yehowa na mama me nsa so atia mo.+ 10 “‘Hwɛ, ɛda no reba! Abɛn!+ Adu wo so;* abaa no afefɛw na ahantan afifi. 11 Basabasayɛ anyin abɛyɛ amumɔyɛ abaa.+ Wɔn ankasa oo, wɔn ahode oo, wɔn dɔm oo, wɔn anuonyam oo, emu biara renka. 12 Ɛbere no bɛso, na da no bedu. Mma nea ɔtɔ nnni ahurusi na nea ɔtɔn nso nnni awerɛhow, efisɛ abufuhyew aba dɔm no nyinaa so.*+ 13 Sɛ nea ɔtɔn no nya ne ti didi mu mpo a, ɔrentumi nsan nkɔ nea watɔn no ho, efisɛ anisoadehu no fa nnipa no nyinaa ho. Obiara rensan n’akyi, na wɔn bɔne nti obiara rentumi* nnye ne ho nkwa. 14 “‘Wɔahyɛn torobɛnto+ na obiara asiesie ne ho, nanso obiara nni hɔ a ɔrekɔko, efisɛ m’abufuhyew aba nnipa no nyinaa so.+ 15 Afoa* retwɛn wɔ abɔnten,+ na nsanyare a edi awu ne ɔkɔm wɔ fie. Obiara a ɔwɔ afuw mu no, afoa bekum no, na wɔn a wɔwɔ kurow mu no, ɔkɔm ne nsanyare a edi awu bɛmene wɔn.+ 16 Wɔn a wobenya wɔn ti adidi mu no beguan akɔ mmepɔw so, na wɔbɛyɛ sɛ abon mu mmorɔnoma, na obiara bɔne nti, obesi apini.+ 17 Wɔn nsa nyinaa bedwudwo, na nsu bɛteɛ afa wɔn nkotodwe ho.*+ 18 Wobefurafura awerɛhow ntama*+ na wɔn ho apopo.* Wɔn nyinaa ani bewu na wɔn nyinaa ti so apa.*+ 19 “‘Wɔbɛtow wɔn dwetɛ agu mmɔnten so, na wɔn sika kɔkɔɔ bɛyɛ wɔn tan. Yehowa abufuw da no,+ wɔn dwetɛ anaa wɔn sika kɔkɔɔ rentumi nnye wɔn. Ɛremma wɔmmee* na wɔn yafunu renyɛ ma, efisɛ ayɛ* hintidua a ɛma wɔyɛ bɔne. 20 Wɔn agude fɛfɛ no nti wɔayɛ ahantan, na wɔde ayɛ* akyiwade ahoni, kyerɛ sɛ, wɔn abosom fĩ no.+ Enti mɛma adan atantanne ama wɔn. 21 Mede bɛhyɛ* ahɔho nsa ma wɔafom, na mede ama asaase so nnebɔneyɛfo ma wɔafa no sɛ nneɛma a wɔanya afi ɔko mu, na wobegu ho fĩ. 22 “‘Meyi m’ani afi wɔn so,+ na wobegu me hintabea* ho fĩ, na akorɔmfo werɛmfo bɛba abegu ho fĩ.+ 23 “‘Yɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn* no,+ efisɛ ntɛnkyea mogya ahyɛ asaase no so ma,+ na basabasayɛ nso ayɛ kurow no ma.+ 24 Mede aman no mu abɔnefo bɛba+ ma wɔabɛfa wɔn afi;+ mɛma ahoɔdenfo ahantan atu ayera na wɔn kronkronbea ho agu fĩ.+ 25 Sɛ wɔn ahoyeraw ba a, wɔbɛhwehwɛ asomdwoe nanso wɔrennya.+ 26 Mmusu bedi mmusu akyi, amanneɛbɔ bedi amanneɛbɔ akyi, na nnipa bɛhwehwɛ anisoadehu afi odiyifo hɔ,+ nanso mmara* bɛbɔ ɔsɔfo, na afotu* abɔ mpanyimfo.+ 27 Ɔhene bedi awerɛhow,+ na obirɛmpɔn befura ahoyeraw* na ehu bɛma asaase no sofo nsa awosow. Me ne wɔn bedi sɛnea wɔn akwan te, na sɛnea wɔabu atɛn no, saa ara na mebu wɔn atɛn, na wobehu sɛ mene Yehowa.’”+
^ Nt., “ebenyan.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “nhwiren abotiri no aba.”
^ Kyerɛ sɛ, nea ɔtɔ agyapade oo, nea ɔtɔn oo, wɔn mu biara rennya mfaso, efisɛ ɔsɛe bɛba wɔn nyinaa so.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “na obiara rentumi mfa kwammɔne biara so.”
^ Nt., “ahopopo bedura wɔn ho.”
^ Kyerɛ sɛ, awerɛhow bɛma wɔayi wɔn ti kwabokwabo.
^ Anaa “wɔn kra mmee.”
^ Kyerɛ sɛ, wɔn dwetɛ ne wɔn sika kɔkɔɔ.
^ Kyerɛ sɛ, wɔn nneɛma a wɔde sika kɔkɔɔ ne dwetɛ ayɛ no.
^ Kyerɛ sɛ, wɔn sika kɔkɔɔ ne dwetɛ a wɔde yɛ ahoni no.
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛfa Yehowa tenabea kronkron no pia mu pia no ho.
^ Kyerɛ sɛ, mpokyerɛ a wɔde gu nkoa.
^ Anaa “abasamtu.”